चुनाव त यता पो लाग्यो ! पत्रकार धमलालाई अफरै अफर...
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ असोज २० शुक्रबार |
काठमाडौं । मुलुक अहिले प्रतिनिधसभा र प्रदेशसभामा होमिने तयारीमा छ । नेताहरु आफु निकट दलका शिर्ष नेताहरुको मा चहारिरहेका छन् । यसै अवसरमा एक पत्रकारलाई विभिन्न दलहरुले उमेदवार बन्न आग्रह गरेको खबर छ ।
नेपाली काँग्रेसले पत्रकार ऋषि धमलालाई धादिङबाट उम्मेदवार बनाएसँगै धमलालाई अहिले अन्य दलहरुले पनि आफ्नो पार्टीबाट चुनाव लड्नको लागि निरन्तर आग्रहहरु आईरहेका छन् । चुनाव त यता पो लाग्यो ! पत्रकार धमलालाई अफरै अफर सञ्चार क्षेत्रमा ब्यापक चर्चा चलेको छ ।
रिपोर्टस क्लब नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष रहेका धमलालाई काँग्रेसले समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बनाएको हो । काँग्रेसले चलाखीपूर्ण तवरले ऋषिराज धमला नाम राखेर उम्मेदवार बनाएको र केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिसका लागि पठाएको धादिङ कांग्रेसले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं २ का तर्फबाट धमलालाई उम्मेदवार बनाइएको हो ।
धमलाले अब के साँच्चिकै पत्रकारिता छोड्छन त ? या राजनीतिमा आईहाल्छन् कि के गर्छन ? यो प्रश्न अहिले धेरैको मनमा उब्जिएको छ । कतिपयले उनलाई यस्तै खरो पत्रकारितामा रहेको हेर्न चाहेका छन् भने कतिपयले राजनीतिमा आए हुन्थ्यो भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर धमला भने अहिले मन र मष्तिष्कको दोहोरो युद्धमा छन् । हुन त उनले अहिलेसम्म कुन पार्टीमा जाने भनेर समेत मुख खोलेका छैनन् ।
बस्, यति हो राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने दबाब सबै प्रमुख दलहरुबाट आईरहेको छ । तर उनले भने सोचेका छैनन् ।
त्यस्तै राजपा नेपालका नेताहरुले पनि धमलालाई चुनाव लड्नको लागि आग्रह गर्दै आएका छन् । हालै मात्र राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादवले पनि धमलालाई आफ्नो पार्टीबाट चुनाव लडे जहाँबाटपनि टिकट दिने बताएका थिए ।
यता राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि उनलाई आफ्नो पार्टीबाट चुनाव लड्नको लागि आग्रह गर्दै आएका छन् ।
पहिलो पटक इन्जिनियरिङ विषयको पढाइ शुरु
बस दुर्घटना हुँदा ३२ घाइते
कामपाका मेयर शाक्य सरकारी पैसामा श्रीमतीसहित अमेरिका
सिंहदरबारमै सुरक्षा थ्रेट भन्दै पश्चिम गेट सर्वसाधारणका लागि बन्द
‘पाँचौं एशियन पेण्ट्स न्यूबिज कन्क्लेभ तथा अवार्ड २०१८’ आज